လုပ်ငန်းခွင်စဝင်မယ့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအသုံးဆောင်တွေ လိုအပ်မလဲ? – FemaleWear.net
လုပ်ငန်းခွင်စဝင်မယ့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအသုံးဆောင်တွေ လိုအပ်မလဲ?
ကျောင်းပြီးစလူငယ်တွေအနေနဲ့ ရုံးလုပ်ငန်းခွင်ထဲကို ပထမဆုံးသွားဖို့အတွက် ကြောက်လန့်ကောင်းကြောက်လန့်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် first impression ကို အကောင်းဆုံးလိုချင်ကြတာတော့ လူတိုင်းပါဘဲ။ ဒီအဆင့်ဟာအရေးကြီးတာမို့ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုသိထားဖို့ အရမ်းဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ရုံးလုပ်ငန်းခွင်ထဲကို ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ Blazer အင်္ကျီတစ်ထည်ကတော့ လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ အရမ်းစျေးကြီးဖို့မလိုဘဲ quality အသင့်တင့်လေးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ သင့်အလုပ်ရှင်နဲ့ ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ဆက်ဆံတာဘဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့အမြင်မှာ သင့်ကိုမြင်ရကြည့်ရတာ အမြင်ရှင်းပြီး ကြည့်ကောင်းနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အဝတ်စားကြောင့် တပါးသူကို မျက်စိမရှုပ်စေတော့ဘူးပေါ့။
ဒါကတော့ သိပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါ။ ရုံးတက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကို တနေကုန်မြှုပ်နှံထားရတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်စားဟာ သက်တောင့်ရှိပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုအနှောင့်ယှက်ဖြစ်မနေစေဖို့ကလည်း သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။
နာရီအတွက်ကတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောနေစရာတော့ မလိုလောက်ပါဘူးနော်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အချိန်တိကျမှုက ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောမှုနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေပါတယ်။ အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ် လက်မှာ accessories တွေ ရှုတ်ထွေးနေတာထက်စာရင် နာရီဟာသင့်ကို ပိုပြီး smart ဖြစ်စေပြီး ကြည့်ကောင်းစေပါတယ်။ အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ သူတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း သတ်မှတ်ခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။
ရုံးသွားတဲ့အခါ လိုအပ်သမျှပစ္စည်းတွေကို အကုန်သယ်ရဖို့ အလှလွယ်တဲ့ အိတ်မျိုးလောက်နဲ့တော့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဥပမာ – သင်ဟာ ငွေထည့်ဖို့ လက်ကိုင်အိတ်သေးသေးလေးတစ်လုံးလည်း ရှိမယ်။ ဖုန်းရှိမယ်။ အိမ်သော့တွေ သိမ်းဖို့လည်းလိုအပ်မယ်။ မိက်ကပ်ပစ္စည်းအနည်းငယ်လည်း သယ်ချင်သေးတယ် အစရှိသဖြင့် သယ်ဆောင်းသွားချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ အလွယ်တကူထည့်လို့ ရနိုင်တဲ့ အိတ်ကျယ်ကျယ်ကြီးကြီးတစ်လုံးလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒီအခက်ခဲတွေဟာ နယ်ကလူတွေအတွက် မသိသာပေမယ့် ရန်ကုန်ကဝန်ထမ်းတွေ အများဆုံးကြုံရလို့ အိတ်ကလည်း သတိထားရမယ့် အချက်တစ်ချက်ပါ။ အရမ်းစျေးကြီးတဲ့အိတ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ ပစ္စည်း weight ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး quality အသင့်တင့်အိတ်မျိုးဆို လုံလောက်ပါတယ်။
5. Low Heel
ဖိနပ်ကလည်း အရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကုမ္မဏီရုံးတွေမှာ လုပ်တဲ့သူတွေအတွက် ဒါလေးကပိုပြီးသတိထားစရာ အချက်တစ်ချက်ပါ။ သူတို့လူမျိုးတွေဟာ smart ဖြစ်တာကို သဘောကျပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း smart ကျကျနေတတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် Shoe တွေကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တဲ့အခါ ခပ်ပါးပါးဒေါက်ကိုသာ ရွေးချယ်သင့်ပြီး စိတ်အနှာက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့ pencil heel လိုအမြင့်တွေကိုတော့ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းခွင်စဝင်ဖို့အတွက် ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အရာလေးတွေကို သတိထားဖို့လိုအပ်တာ သိပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော်ရွှင်စွာအောင်မြင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Style လည်းကျ အပြင်ထွက်ရင်လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးဘဲ ဝတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ Lazy Girl လေးများအတွက်
မြန်မာငွေ သိန်း ၂၀ တန် ပလပ်စတစ်ဦးထုပ်တွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချလိုက်တဲ့ Chanel